Jubbaland oo dib ugu fasaxday Wasiir Shaqada looga joojiyay tuhun musuq maasuq – Banaadir Times
Jubbaland oo dib ugu fasaxday Wasiir Shaqada looga joojiyay tuhun musuq maasuq
By banaadir 29th December 2020 75 No comment
Madaxweyne ku xigeenka dowlad gobaleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa soo saarey warqad ay ku caddahay in uu dib shaqadiisa usii wadan karo wasiirka wasaaradda xannaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Jubbaland.
Markey taarikhdu aheyd 22 -08-2020 ayuu madaxweyne kuxigeenka shaqada ka joojiyay wasiirka wasaradda xannaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa kadib markii lagu soo eedeeyay wax Is daba marin iyo lunsasho xoolo dad wayne.
Warqad kasoo baxday Xafiiska Madaxweyne kuxigeenka ayaa waxa lagu sheegay in kadib baaritaan la sameeyay in xafiiska Madaxweynuhu ogaaday in aysan wax ka jirin eedeeymahaasi isagoo dib shaqadii ugu fasaxey wasiirka.
Wasiirka ayaa loo ogolaaday in uu gudan karo waajibaadkiisii shaqo ee wasaaradda uu hogaamiyo dibna usii wadan karo shaqadiisi una sii adeego bulshadiisa.
Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqday go’aan ku saabsan Ciyartooydii la dhaawacay
Maxay kawada hadleen Midowga Musharixiinta, Axmed Madoobe & Cabdi Xaashi?
Kenya oo bedeshay qareenadii u doodayay dacwada badda ee kala dhexeeysa Somalia
By banaadir 21st February 2021
Dowlada Soomaliya oo ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Alshabaab.
By banaadir 4th March 2020
Maxaa kajira in 30 Ruux Coronavirus ugu dhinteen Isbitaal Martiini?
By banaadir 16th February 2021